ESAT Afaan Oromo - Page 57 of 75 - ESAT Afaan Oromo
Burundiin Loltoota ishee nagaa akka kabachiisaniif gara Sumaliiyaatti ergite ji’a dhufu jalqabdee akka baastuu beeksiisite
Burundii humna nagaa kabachiisa Gamtaa Afriikaa jalatti loltoota ishee 5,432 gara Sumaliiyaatti ergite waggaa tokko guutuu mindaan waan isaaniif hin kaffalamneef ji’a dhufu baasuuf murteessuu ishee beeksifte Loltoota Gamtaa Afriikaa naga kabachiisuuf gara Sumaliiyaatti ergaman keessa looltoota baay’ee gumaachuun Burundiin adda dureedha. Biyyaattiin Loltoota ishee gara Sumaliiyaatti geejjibsiisuuf baasii baay’ee akka baastee pirizedaantiin biyyaatti Piyaar Nikurunziizaa beeksiisaniiru. Gamtaa Afriikaa wajjiin ...
Mana murtii federaalaa dhaddachaa Aaraadaa Dr. Marara Guddinaa guyyota qorannoo dabalataa guyyoota 28 ti dabarsan.
Manni Murtii Federaalaa Itoopiyaa dhimmaa Dr mararaa ilaalu, qorannoo dabalataa gochuudhaaf gaaffii Pooliisiin dhiheessee fudhachuudhaan Dr mararaan guyyoota 28tif akka qorannoo jala turan ajajuun isaa beekameera. Pooliisiin dhimmaa isaanii qorachaa jiru Dr Maraaraa Guddinaa yakka shororkeessummaa irratti hirmaachuusaanii qorannoo adda adda qorachaa akka jiru dhaddachaatti himuusaa gaazexxaan Addiis Standard jedhamu gabaaseera. Yaa ta’u malee, hogganaan Paartii Kongiraasii Federalisiitii Oromoo Dr ...
Mormiin ummataa guddina diingdee fi galii damee turiziimii irra argamu akka hir’atuuf gumaacha olaanaa gumaachuusa beekameera.
Mormii Ummataa waggaa tokkoof haala adda ta’een cimee itti fufeen guddina diingdee Itoophiyaa harkaa laman ni guddata jedhamee tilmaame ture. Mormii Ummata kana booda guddinni diingdee biyyaatti dhibbentaa saddeetitti akka gadi bu’aaf sababa ta’uu toori oduu Afriikaa Niwuus jedhamu gabaaseera. Diingdee Itoophiyaa waggoota kurnaan darban harkaa laman guddataa jira jedhamee odeeffamuuf sababa mormii ummataa wajjiin walqabatee yeroo jalqabatiif gara harkaa ...
Federeeshinii Atleetiksii Itiyoophiyaa Atleetota dawaa humna jajjabeessu fayyadamanii argamanii umirii guutuu waldorgommii irraa ittisuuf murtii dabarse Atileetoonni mormaniiru
Atileetoonni dawaa humna jajjabeessuu kamuu fayyadamanii argaman kana booda umirii guutuu waldorgommii Atileetiksii irraa akka ittisaman Pireezdaantiin fedareeshiinii Atleetikisii Itoophiyaa Kumaalaa Haayilee Gabrasillaasee toora oduu Rooyitarisiitti himeera. Ji’oota muraasaan dura Atileetoonni Itoophiyaa jaha yeroo waldorgommii dawaa humna namaa jajjabeessuu fayyadamanii argamaniiru jechuu qoratamaa akka jiran ni yaadatamaa. Murtiin Federeshiiniicha amma kun Atileetoota jahan miidhuu danda’a jedhameera Atileetoonni dawaa kana fudhatanii ...
Naannoo Gambeellaatti rakkoon kenniniisa lafa qonnaa Invastimantii ilaalchisuun gabaasni koree wajjiira ministira muummeettiin dhiyaate abbooti qabeenya hunda kan hin hirmaachisne jedhameera
Abbootiin Qabeenyaa naannoo Gambeellaatti invasimantii qonnaa irratti bobba’an bu’aan qorannoo wajjiira muummeetiin dhiyaate abbooti qabeenya kan hin hirmaachisne fi dhugaa irraa kan faagate jechuun mormaniiru. Abootiin qabeenya dhunfaadhaan baankoota irra birrii kan liqeeffatan ta’uus, bu’aan qoranichaa raawwii hojii isaanii dimishaashaan kan ka’ee jedhaniiru Naannichaatti karaa seera- qabeessaan lafa fudhatanii mallaaqqa baay’ee ramaduun hojii jalqabuusaanii abbootiin qabeenyaa kunniin dubbataniiru. Abbootii Qabeenya ...
Naannoo Xaanaa Balaas Soostiitti warshaan shukkaraa ni hundeeffama jedhamee shankoorri lafa hektaaraa kuma 12 irratti misoome ibiddaan akka gubatu murta’uusa maddeen oduu ESATitti himaniiru
Mootummaan Shankoorri lafa hektaaraa kuma 12 irratti misoomee kun akka gubatuuf kan murteesseera. Sababni isaa immoo warshaan shukkaraa waan hin xumuramneef shankoorii sadarkaa guddinaa xumuruun manca’uu waan jalqabeef jedhameera. Shankoora lafa hektaara tokkoo irraa shukkaarri kumtaalaa 200 akka omishamu himameera. shankoora lafa hektaaraa kuma 12 irratti misoomee kun akka gubatu waan murta’eef kisaaraa birrii biiliyoonaa 5 qaqqabsiisa jedhameera. Kisaaraa kana ...
Abbootii Qabeenyaa Warshaa huccuu biyya Tarkii lama liqii qarshii biliyoqona tokkotti dhiyaatu Mootummaa Itoophiyaa irraa liiqeeffatan osoo hin kaffalin biyyaa bahan.
Abbooti Qabeenyaa biyyaa Tarkii laman hojii invastimantii warshaa Uccuutiif baankii misooma Itoophiyaa irraa birrii akka liiqeffatan himameera. Baankiin Misoomaa Itoophiyaa namoonni laman kun biyyaa akka hin baaneef qaama dhimmii ilaalatuu gaaffii dhiyeessee turee. Yaa ta’u malee, gaaffiin baankich dhiyeesse hatattaamaan deebii waan hin arganeef namoonni laman gara Tarkiitti akka deebi’an beekameera. Abbooti qabeenya Tarkii Sayifatiin fi Imaam Altiinbaa jedhaman liiqii ...
Jirattoonni saba Amaaraa naannoo Beenishanguul Gumuuz Aanaa Bulaan jiirataan miidhaa guddaan irra gahaa akka jiru beeksiisan.
Jiraattoonni saba Amaaraa Aanaa Bulaan jiirataan maqaa meeshaa waaraanaa naanneesituu jedhuun miidhaa guddaan irra gahaa akka jiru beeksiisaniiru Sabni Amaaraa naannoo Beenishanguul Gumuuz jiiratan yeroo adda addaa loltoota mootummaatiin miidhaan irra gaha tureera. Sababa kanan jiirattoonni saba Amaaraa baay’een mana jireenyaa isaaniitti baqachuuf dirqamaniiru. Keessaattuu bara 2005 jalqabee miidhaan hidhaa, reebichaa fi mana jireenyaa isaanii gadi dhiisaanii baqachuu waan itti ...